‘तारेमाम’ लिएर आए सञ्जीव – bampijhyala.com
Home > भिडियो > ‘तारेमाम’ लिएर आए सञ्जीव
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार २२:३८ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । ‘चुलेसीमा, गोरी यता सुनन, रमाइलो छ यो साँझ’ जस्ता चर्चित गीतका गायक सञ्जीव सिंहले २ वर्षको अन्तरालपछि ‘तारेमाम’ बोलको गीत ल्याएका छन् । गीतमा सुदिप सिंहको संगीत तथा प्रदिप सिंहको शब्द रहेको छ ।
स्टेरियो रेकर्डको प्रस्तुति रहेको गीतको भिडियो पनि बनेको छ । जसमा गायक सिंहले काठमाडौंको एक रैथाने यूवकको रुपमा देखिएका छन् । भिडियोमा काठमाडौंको रहनसहन, भेषभुषा र संस्कृति प्रस्तुत गरिएको छ । निकेश खड्काले निर्देशन गरेको भिडियोमा रुपेश थापाको छायाँकन, विकास धमलाको सम्पादन छ ।
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:३९ bampijhyala 0
दयाहाङ निर्देशिन नाटक ‘मितज्यू’
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौंं । अभिनेता दयाहाङ राईको निर्देशन रहेको नाटक...
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १६ मंसिर २०७७, मंगलवार २२:३८
सम्झनामा जेठ ३ १६ मंसिर २०७७, मंगलवार २२:३८
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १६ मंसिर २०७७, मंगलवार २२:३८
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १६ मंसिर २०७७, मंगलवार २२:३८
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १६ मंसिर २०७७, मंगलवार २२:३८